Iqale kahle iCeltic kwi-CAF Confed Cup | Scrolla Izindaba
IBloemfontein Celtic ihlule iAS Maniema Union ngamabili eqandeni emlenzeni wayo wokuqala we-CAF Confederation Cup ngeSonto ntambama eJoseph Kabila Kabange stadium e-Kindu, e-Democratic Republic of Congo.
Umgadli weCeltic uHarris Tchilimbou uvalele amagoli phakathi kwemizuzu eyishumi yesiwombe sokuqala. Lo mgadli osanda kusayinwa futhi obedlalela Uthongathi uMenzi Ndwandwe, ukhuphule izinga kuBloemfontein Celtic.
Iqembu lase-Free State liye ekhefini kuyilona eliphethe umdlalo. Amagoli amabili atholakale ngokulandelana akhombise ukuthi anele ukunika iPhunya Sele Sele umdlalo wabo wokuqala ukuwina emqhudelwaneni we-CAF.
ISiwelele sa Masele ithathe inzuzo enkulu ngaphambi komlenze wabo wesibili we-CAF Confederation Cup ngamagoli amabili asekuhambeni. Abazange bangenelwe yigoli. Iqembu lasekhaya lidinga ukushaya amagoli alinganayo ukuze lidlulele ezingeni elilandelayo.
Umqeqeshi weCeltic uJohn Maduka akahambanga neqembu futhi abanye abadlali basale ngemuva ukuze bezogxila kowamanqamu eLigi neMTN 8. Kodwa-ke, iqembu lesibili belinamandla kakhulu kunohlangothi lwase-Congo.
Elinye iqembu laseNingizimu Afrika elikwi-CAF Confederation Cup yiOrlando Pirates Football Club, kodwa amaBhakabhaka bekungafanele adlale kule mpelasonto.
IBloemfontein Celtic kufanele igxile kowamanqamu eLigi ne-MTN 8 uma isibhekana neOrlando Pirates mhla zi-12 kuZibandlela kowezi-2020 endaweni esazonqunywa yiLigi.
Umncintiswano wamazwe omabili we-CAF wokuncintisana emlenzeni wesibili uhlelelwe impelasonto mhla zi-5 kuZibandlela kowezi-2020 e-Seisa Ramabodu Stadium, ozoqala ngo-15h30.
Isithombe: Ikhasi leBloemfontein Celtic